धनगढीलाई साखको चिन्ता,अन्यलाई प्लेअफ ! | Hamro Khelkud
धनगढीलाई साखको चिन्ता,अन्यलाई प्लेअफ !
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – तेस्रो संस्करणको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) मा आज पनि दुई खेल हुँदै छन् । पहिलो खेल विहान ९ बजे रुपन्देही च्यालेन्जर्स र धनगढी स्टार्सबीच हुनेछ ।
धनगढीको लागि आजको खेल साखको लडाईं मात्र हुने छ । सुरुवाती चार खेलमा ३ मा हार र १ मा अंक बाँडेको धनगढी यसअघिनै समुह चरणबाट बाहिरिसकेको छ । साविक विजेता समेत रहेको धनगढी आजको खेलमा जित निकाल्दै सुखद अन्त्य गर्ने सोचका साथ मैदान उत्रनेछ । त्यस्तै सुरुवाती दुई खेलमा जित र दुई मा पराजित भएको रुपन्देही अंक तालिकामा तेस्रो स्थानमा छ । आजको खेलमा पराजित भए प्लेअफको लागि रुपन्देहीले विराटनगर र सिवाईसी अत्तरियाको नतिजा पर्खनु पर्ने छ । त्यसैले पनि रुपन्देहीलाई आजको खेल गर वा मर जस्तै बनेको छ ।
त्यस्तै दिउँसो १ बजेपछि सुरु हुने दोस्रो खेलमा सिवाईसी अत्तरिया र विराटनगर किंग्स खेल्ने छन् । अत्तरियाले ३ खेलमा २ मा जित र १ मा हारका साथ दोस्रो स्थानमा छ । अन्तिम दुईमा रहेर प्ले अफ खेल्न अत्तरियालाई पनि जित्नै पर्ने दवाव देखिन्छ । अत्तरिया आजको खेलमा पराजित भए अन्तिम चार रहेर प्ले अफ खेल्न गोल्डेन्ससँगको नतिजा आफ्नो पक्षमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा नेट रन रेटका आधारमा प्ले अफको टुङ्गो लाग्नेछ ।
त्यस्तै विराटनगर किंग्सलाई पनि प्ले अफमा स्थान बनाउन आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ । विराटनगर सुरुवाती चार खेलमा १ मा जित १ मा हार र २ मा अंक वाड्दै चार अंकका साथ पाँचौ स्थानमा छ । आजको खेलमा विराटनगर विजयी भए सोझै प्लेअफमा पुग्नेछ । पराजित भएको खण्डमा नेट रनरेटका आधारमा महेन्द्रनगर पुग्न सक्ने उच्च संभावना छ । महेन्द्रनगर पनि त्यसैको प्रतिक्षा गरेर बसेको छ ।